दिन को उत्पादन: LAKME निरपेक्ष शाईन लाइन तरल EYELINER समीक्षा - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
दिन को उत्पादन: Lakme निरपेक्ष शाईन लाइन तरल Eyeliner समीक्षा
घर सुन्दरता सुझावहरू बनाउनुहोस् Oi-Riddhi Roy द्वारा बनाउनुहोस् सुझावहरू रिद्धि नोभेम्बर २२, २०१ on मा
तरल लाइनर कुनै पनि महिलाको व्यर्थ को एक धेरै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यसो भए, हामी यस पोष्टमा लकमे निरपेक्ष शाइन लाइन लिक्विड आईलाइनरको समीक्षा गर्दैछौं। हेर।
यो एक धेरै स्लिम प्याकेजि inमा आउँदछ। बाहिरी बाकस पातलो कालो बक्स हो जसमा उत्पादको नाम र यसमा लेखिएका विवरणहरू छन्। भित्री कन्टेनर एक पारदर्शी ट्यूब हो जसले उत्पादनको रंग देख्न सजिलो बनाउँदछ। यो धातुको टोपी सहित एक बेलनाकार ट्यूब हो।
टमाटरको रस अनुहारमा लगाउने फाइदाहरू
लकमे भारतको अग्रणी र color्ग कस्मेटिक ब्रान्ड हो जुन उच्च-अन्त, विश्व-स्तरीय र color्ग कस्मेटिक्स र स्किनकेयर उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। लकमेमा एक विशाल उत्पाद दायरा छ जुन भारतीय छालाको लागि विशेषज्ञहरूले ख्याल गरेका थिए। ब्रान्डले १ in बर्ष भन्दा बढी देखि भारतको प्रमुख फैशन कार्यक्रम लकमे फेशन वीकको साथ भारतमा फेसनको पनि परिभाषा गर्दै छ। यस इज्युमिनेट लुक 'यस मौसममा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय रनवेहरूमा पछिल्लो प्रवृत्ति हो। यो कुनै कारण बिना चमकको उत्सव मनाउँछ। 'द इलमिनेट लुक' चिम्मर, पारदर्शी र रमाइलो मेकअपको बारेमा हो, परावर्तनशील चमकको साथ। लकमे निरपेक्ष शाइन लाइन आईलाइनर तपाईको आँखालाई सही परिभाषा र चमक दिनको लागि लकमे फेसन वीकमा ब्याकस्टेज विज्ञहरू द्वारा विशेष रूपले रचना गरिएको हो।
लाक्मे निरपेक्ष शाईन लाइनका फाइदाहरू र सुविधाहरू:
Lakme निरपेक्ष शाईन लाइन एक एकल स्ट्रोक अनुप्रयोग छ
लाक्मे निरपेक्ष शाईन लाइनसँग तीव्र रंगको साथ धातुको शेडहरू छन्
Lakme निरपेक्ष शाईन लाइन सजिलै र सजीलो ग्लाइड गर्दछ
बनावट / स्थिरता: बनावट तरल लाइनरको लागि उत्तम छ। यो सजिलैसँग सुख्खा हुन्छ र धेरै बर्षो पनि हुँदैन। यो पनि वास्तवमा लामो समय सम्म रहन्छ।
रंगद्रव्य: यो एक धेरै गाढा कालो लाइनर हो र ब्रशको एक स्वाइप सबैभन्दा गाढा कालो छाया प्राप्त गर्नका लागि पर्याप्त छ।
कसरी घरमा एक दिन निष्पक्ष हुने
जब तपाईं नाम 'शाइन लाइन' देख्नुहुन्छ तपाईं चमकदार फिनिशको आशा गर्दै समाप्त हुनुहुनेछ, जुन हाम्रो eyeliners मा मनपर्दैन। तर यो वास्तवमा सही होइन, किनकि eyeliner पूर्ण रूपमा म्याट समाप्त गर्न सुक्छ। यो लगभग १ 15 सेकेन्ड वा मा सुक्छ, जुन वास्तवमै उत्कृष्ट छ।
ब्रश: पातलो ब्रश कुनै पनि प्रकारको eyeliner आकारको लागि उपयुक्त हुन्छ जुन तपाईं सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई तपाईंको पखेटा eyeliner सुपर तेज चाहिन्छ। यो ब्रश प्रयोग गर्न वास्तवमै सजिलो छ।
छातीमा फ्याट कसरी कम गर्ने
समग्रमा, यो वास्तवमै राम्रो र सस्तो तरल eyeliner हो।
हामी वास्तवमै कुनै पनि सोच्न सक्दैनौं!
मूल्य: Rs 350० रूपैयाँ, तर यो लगभग सँधै छुटमा हुन्छ!
प्लेटलेट काउन्टी बढाउन के खानुपर्दछ
कसरी आफ्नो छाती को आकार लाई कम गर्ने
१ दिनमा कसरी सेता हुने
खुला पोर्सका लागि उत्तम फेस प्याक